May 2019 – MM File
သင့် ဖူးစာရှင်က ဘာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးလဲ ?
သင့် ဖူးစာရှင်က ဘာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးလဲ ? ဖူးစာရှင်က မြေပြန့်ကလား တောင်ပေါ်ကလား ဘယ်ဒေသကများ ဖြစ်နေမလဲ ? ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင်က ဘယ်လို Single မျိုးလဲ ?
သင်က ဘယ်လို Single မျိုးလဲ ? ကိုယ်က ဘယ်လို Single အမျိုးအစားထဲ ပါနေလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း […]
ဘယ်လိုစကားလုံးက သင့်ကို ကိုယ်စားပြုနေလဲ ?
ဘယ်လိုစကားလုံးက သင့်ကို ကိုယ်စားပြုနေလဲ ? သင့်ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode […]
လူတွေ သိထားသင့်တဲ့ သင့်အကြောင်း ၄ ခု
လူတွေ သိထားသင့်တဲ့ သင့်အကြောင်း ၄ ခု လူတွေ သိထားသင့်တဲ့ သင့်အကြောင်း ၄ ခုက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ ? ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ […]
သင် မိဘဆိက ဘယ်လိုအမွေရထားတာလဲ ?
သင် မိဘဆိက ဘယ်လိုအမွေရထားတာလဲ ? ကောင်းမွေလား ဆိုးမွေလား ဘယ်လို အမွေမျိုးဖြစ်မလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode […]
ဘယ်အချက်ကြောင့် သင်က ချစ်စရာကောင်းနေရတာလဲ ?
ဘယ်အချက်ကြောင့် သင်က ချစ်စရာကောင်းနေရတာလဲ ? ကိုယ်ဘာကြောင့် ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့တော့လိုမယ်နော် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode ဘယျအခကျြကွောငျ့ […]
သင့်နာမည်ကို ကြားလိုက်တာနဲ့ လူတွေ ပြေးမြင်မိတဲ့အရာက ဘာဖြစ်မလဲ ?
သင့်နာမည်ကို ကြားလိုက်တာနဲ့ လူတွေ ပြေးမြင်မိတဲ့အရာက ဘာဖြစ်မလဲ ? လူတွေက သင့်ကို ဘာနဲ့တွဲပြီး သိထားသလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း […]
သင့် crush သင့်ကို ကြွေဆင်းလာအောင် ဘယ်လိုတော်ကီမျိုးပစ်သင့်သလဲ ?
သင့် crush သင့်ကို ကြွေဆင်းလာအောင် ဘယ်လိုတော်ကီမျိုးပစ်သင့်သလဲ ? ကဲ တော်ကီအလန်းလေးတွေ ကြည့်လိုက်ရအောင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင် ဘာကြောင့် အိမ်ထောင်ကျမှာလဲ ?
သင် ဘာကြောင့် အိမ်ထောင်ကျမှာလဲ ? ဘယ်လိုဘယ်ပုံကြောင့် အိမ်ထောင်ကျမယ်ဆိုတာ အဖြေရှာကြည့်ရအောင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode သငျ […]
June လအတွင်း ကြုံရမယ့် သင့်ကံကြမ္မာ အခြေအနေက ဘာဖြစ်မလဲ ?
June လအတွင်း ကြုံရမယ့် သင့်ကံကြမ္မာ အခြေအနေက ဘာဖြစ်မလဲ ? ကံဆိုးမှာလား ကံကောင်းမှာလား ဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာ… ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
MMFIle Website isaDaily News Blog and We provides Latest Local and International News, Breaking News, Celebrity News and Life Style.
အလုပ်ခွင်က သူငယ်ချင်းတွေက အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနေတဲ့ အချက် (၆)ချက်
ဒီလျှို့ဝှက်ချက်(၃)ခုက သင့်ကို လူချစ်လူခင်များတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်စေမှာပါ
ဝိတ်ချပြီးလိုက်ချိန်မှာ မမှတ်မိလောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ကိုးရီးယား အနုပညာရှင်များ
သိန်း (၁၀၀) ကျော် အကုန်ကျခံပြီး ဆံပင်စိုက်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ Russell
လူမဟုတ်တဲ့ ကာရိုက်တာတစ်ခု အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်
(၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ပေါက်ဂဏန်းအစအဆုံး – MM File on သင့်အနာဂတ် ဖူးစာရှင်က ဘယ်မွေးနေ့ နေ့ နံရှင်လဲဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီ
Yunnie on သင့်အနာဂတ် ဖူးစာရှင်က ဘယ်မွေးနေ့ နေ့ နံရှင်လဲဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီ
Han on ဘယ်လို အရာတွေက သင့်ကို ဝိတ်ကျစေနိုင်တာလဲ ?
Ye Mang on ဘယ်လို အရာတွေက သင့်ကို ဝိတ်ကျစေနိုင်တာလဲ ?
san san lin on ဘယ်လို အရာတွေက သင့်ကို ဝိတ်ကျစေနိုင်တာလဲ ?